Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukhenketho lokuzonwabisa » I-UNWTO yazisa uluhlu lweeLali zoKhenketho eziBalaseleyo ngo-2021
Ukhenketho lokuzonwabisa • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Education • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Imizekelo emihle yeelali ezamkela ukhenketho ukunika ithuba nokuqhuba uphuhliso oluzinzileyo iye yabhiyozelwa kwi Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) INdibano Jikelele eMadrid.
I-UNWTO ibhengeze uluhlu lwe "Iilali zoKhenketho ezilungileyo" ngo-2021 eMadrid. Olu luhlu lubandakanya iilali ezingama-44 ezisuka kumazwe angama-32 kwimimandla emihlanu yehlabathi.
Iilali zoKhenketho eziBalaseleyo ngo I-UNWTO Kwasungulwa inyathelo lokuqhubela phambili indima yokhenketho ekukhuseleni iilali zasemaphandleni, kunye nembonakalo yomhlaba yazo, iyantlukwano yendalo nenkcubeko, kunye nemilinganiselo yazo yasekhaya kunye nemisebenzi, kubandakanywa negastronomy yasekhaya. Ezi lali zigqamile ngemithombo yazo yendalo neyenkcubeko, ngaphandle kwezenzo zazo zokuyila nenguqu nokuzinikela kuphuhliso lokhenketho ngokuhambelana ne IiNjongo zoPhuhliso oluZinzileyo (SDGs).
Iilali zavavanywa yibhodi yabacebisi ezimeleyo ngokusekwe kuluhlu lwemigaqo: inkcubeko kunye nemithombo yendalo; ukukhuthazwa nokugcinwa kwemithombo yenkcubeko; uzinzo lwezoqoqosho; uzinzo loluntu; ukuzinza kokusingqongileyo; ukhenketho olunokwenzeka kunye nophuhliso kunye nokuhlanganiswa kwexabiso; ulawulo nokubekwa phambili kwezokhenketho; iziseko ezingundoqo kunye noqhagamshelwano; kunye nempilo, ukhuseleko kunye nokhuseleko.
Zonke iilali ezingama-44 zafumana amanqaku angama-80 okanye ngaphezulu kwali-100 ekunokwenzeka ukuba afumaneke. Eli phulo liquka iintsika ezintathu.
'Ezona dolophana zibalaseleyo zoKhenketho nge-UNWTO': Yamkela iilali ezingumzekelo obalaseleyo wendawo yokhenketho yasemaphandleni eneempahla ezaziwayo zenkcubeko nezendalo, ezigcina kwaye zikhuthaze izithethe zasemaphandleni nezasekuhlaleni, iimveliso kunye nendlela yokuphila kunye nokuzinikela okucacileyo ekuqaliseni izinto ezintsha nokuzinza kuzo zonke iinkalo zayo - uqoqosho. , ezentlalo kunye nokusingqongileyo.
Elona Lali zoKhenketho ziPhuculwa yi-UNWTO': Inkqubo yoPhuculo iya kuxhamlisa inani lelali ezingafikeleliyo ngokupheleleyo kwiikhrayitheriya zokufumana ukuwongwa. Ezi lali ziza kufumana inkxaso kwi-UNWTO kunye namahlakani ayo ekuphuculeni imiba echongiweyo njengezithuba kwinkqubo yovavanyo.
Ezona ndawo ziGqwesileyo zeeLali zoKhenketho ngoThungelwano lwe-UNWTO: Uthungelwano luya kubonelela ngendawo yokutshintshiselana ngamava kunye nezenzo ezilungileyo, ukufunda kunye namathuba. Iza kuquka abameli beelali ezigqalwa njengeyona 'Lali yezoKhenketho iNgcono ngu-UNWTO', iilali ezithatha inxaxheba kwiNkqubo yoPhuculo, kunye neengcaphephe, amahlakani oluntu kunye namashishini abucala abandakanyekayo ekukhuthazeni ukhenketho kuphuhliso lwasemaphandleni.
Zizonke iilali ezili-174 zacetywa ngama-75 I-UNWTO Amazwe angamaLungu (iLizwe ngalinye leLungu lingabonisa ubuninzi beedolophana ezintathu) kwi-pilot ye-2021. Phakathi kwezi, ezingama-44 zamkelwa njengezona ndawo ziBalaseleyo zoKhenketho yi-UNWTO. Ezinye iilali ezingamashumi amabini zizakungena kwiNkqubo yoPhuculo lweli phulo. Zonke iilali ezingama-20 zingena ukuze zibe yinxalenye yoThungelwano lweeLali zoKhenketho eziBalaseleyo ze-UNWTO. Uhlelo olulandelayo luya kuvulwa ngoFebruwari 64.